Transformer - China Shandong Huaxin Electric lembuthuma
Transformer 1.Distribution transformer: Amafutha egxilile ukusatshalaliswa transformer futhi kagesi transformer 2.Characteristics: Ukusebenza ezintathu okhombisa transformer uwoyela-egxilile nefomethi esezingeni GB 1994-1996 "Amandla transformer" futhi GB / T6451-2008 "Technical sepharamitha futhi nezidingo ezintathu okhombisa Uwoyela-egxilile Amandla transformer ". Imikhiqizo kabanzi amandla ukudluliswa nokusatshalaliswa kwezezimboni nakwezolimo amandla amanethiwekhi. Umnyombo yensimbi wenziwe izinga abandayo -...
Amafutha egxilile ukusatshalaliswa transformer futhi transformer kagesi
Ukusebenza ezintathu okhombisa transformer uwoyela-egxilile nefomethi esezingeni GB 1994-1996 "Amandla transformer" futhi GB / T6451-2008 "Technical sepharamitha kanye nezidingo ezintathu okhombisa Uwoyela-egxilile Amandla transformer".
Imikhiqizo kabanzi amandla ukudluliswa nokusatshalaliswa kwezezimboni nakwezolimo amandla amanethiwekhi.
Umnyombo yensimbi wenziwe izinga abandayo -rolled Silicon steel ishidi, kanye lekhoyili yenziwa of high-mpilo-free ithusi, obonisa indlela abheka ngayo izinto ezinhle futhi umcucuzo ephephile.
Iron core wenziwe abandayo iphuma Silicon-steel ishidi conduction eliphezulu uzibuthe futhi ubamukela edonsa-ipulangwe isakhiwo, ukuze indlela yayo kazibuthe sifushane, ukulahlekelwa kanye umsindo ezingeni uphansi;
Fitizela ngezintambo kwemukelwe emazombezombe ngakho ukulahlekelwa ziphansi futhi unekhono elihle ukumelana isekhethi;
ingxenye yayo iyasebenza usebenzisa indlela ekhethekile ukuphokophela okungase ukuqinisekisa okunokwethenjelwa Axial ingcindezi;
Ethangini uwoyela insimbi uhlobo nge isakhiwo egcwele ukusonga ipuleti uhlobo, nokuba Ingaphandle omuhle kakhulu futhi kulula sesondlo
Ukuthembeka: Zonke e-service umkhiqizo abanalo umonakalo noma uwoyela ukuvuza iphutha;
Amafutha ithangi nge izinhlobo ezahlukene isakhiwo futhi ukubukeka okuhle.
Previous: ukumelana lembuthuma
Okulandelayo: Amanzi Ukubandisa System (Tower)
esithandweni ushintsho switch
Electric lembuthuma Isakhiwo Machine